Tue, Jun 2, 2020 at 1:32pm
आठ खर्ब १९ अर्बको बजेट प्रस्तुत (बजेटको पूर्ण पाठसहित)
बुधबार, आषाढ ३०, २०७२ साल
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसमा चालुतर्फ चार खर्ब ८४ अर्ब, पुँजीगत तर्फ दुई खर्ब आठ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब २६ अर्ब रहेको छ । यसमा राजस्वबाट चार अर्ब ७५ अर्ब एक करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तितर्फ दुई अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट एक अर्ब १० अर्ब र..
बजेट ‘लाइभ अपडेट’
आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत पुग्ने अनुमान । कुल आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट । चालु खर्ब चार खर्ब ८४ अर्ब पुँजीगतमा दुई अर्ब आठ अर्ब वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब २६ अर्ब भ्याटको थ्रेसहोल्ड ५० लाख कायम । ४० लाख भन्दा बढी आय गर्नेले आयविवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था । कर विवाद समाधानका लागि स्थायी किसिमको संयन्त्र निर्माण गरिने । चुरोट उत्पादनमा स्वयम निष्काशन प्रणाली । अन्तशुल्कमा सामान्य वृद्धि । भन्सार..
मन्त्रिपरिषदबाट बजेट स्वीकृत, बजेटको आकार आठ खर्ब १९ अर्ब
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले पास गरेको आठ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँको बजेट पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारको तर्फबाट बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक विध्ययेक (बजेट), २०७२, विनियोजन विध्ययक, २०७२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विध्ययेक स्वीकृत गरेको हो । बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषदका सदस्य संसद..
योजना आयोगको सीमाभित्र बजेट आउने
सोमबार, आषाढ २८, २०७२ साल
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगको संशोधित सीमाभित्र आउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले भूकम्प पछि संशोधन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिमा आठ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँको सीमाभित्र रहेर मंगलबार बजेट जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आयोगको तोकेको सीमा नाघ्ने देखिएको छैन, स्रोतले भन्यो– पुँजीगत बजेटमा एक खर्ब ५२ करोड, पुनर्निर्माणका..
बजेट मंगलबार प्रस्तुत गर्ने तयारी
आईतवार, आषाढ २७, २०७२ साल
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) आउँदो मङ्गलबार प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतासहित छुट्टै कोष बनाएर जारी गर्न लागिएको बजेट साढे आठ खर्बको हाराहारीमा आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । पुनर्निर्माण कोषका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्प अघि सात खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँको बजेट..
​बजेटमा अब कर्मकाण्डी कुरा हटाउँछौंः उपाध्यक्ष पोखरेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गाविन्द पाखरेलले आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिनापछि विकासका काम सुरु हुने विद्यमान पद्दतीलाई अबको आर्थिक वर्षबाट सुधार गरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा उनले अख्तियारी दिने, ठेक्का लगाने नाममा महिनौसम्म काम नहुने विद्यमान परिस्थितिलाई आफूहरुले सुधार गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन । अब आर्थिक वर्ष..
​बजेट निर्माणमा परिसंघको सुझावः घाइते अर्थतन्त्रलाई मलम लगाउ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आउँदो बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको भोलिपल्ट मंगलबार उद्योगीहरुको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले विनाशकारी भूकम्पले औद्योगिक क्षेत्र घाइते भएको भन्दै यसबाट ७४ प्रतिशत क्षति निजी क्षेत्रले भोगेकाले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइ मलम लगाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष बस्नेतले भूकम्पले क्षति पुगेको कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनस्थापित गर्न नसके..
बजेटमा के के मागे व्यवसायीले ?
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको बेला निजी क्षेत्रले भूकम्पबाट आफुहरुलाई परेको मर्का बुझिदिन आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पूर्व बजेट छलफलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वको व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलले भूकम्पबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बजेटमा विशेष राहत र सहुलियत दिन माग गरेका हुन । उनीहरुले वैदेशिक सहायताको रकम स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको खरिदमा लगाउन, स्वदेशी उद्योगधन्दाको विकासमा जोड..
कर्णाली छाडी किन बूढीगण्डकीका लागि ताहुरमाहुर ?
शुक्रबार, आषाढ १८, २०७२ साल
काठमाडौं । तीन रुपियाँ प्रतियुनिटमा बन्ने कर्णाली बनाउन नसक्ने तर १५ रुपियाँ प्रतियुनिट निर्माण लागत लाग्ने बूढीगण्डकी निर्माणका लागि ताहुरमाहुर गर्ने नियतले मुलुक विकासमा कमजोर साबित भएको सभासदले बताएका छन् । संसद्को बिहीबारको बैठकमा आगामी बजेटमाथिको छलफलमा उनीहरुले विकासको नमुना कस्तो बनाउने र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा सरकार र राजनीतिक दलले एउटा स्पष्ट खाका र कार्ययोजना..
​आउँदो बजेट निर्माणका लागि छलफल सुरु, कस्ले के भने ?
बिहिवार, आषाढ १७, २०७२ साल
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा बुधबारबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । विनियोजन विध्येक संसदमा पेश गर्नुअघि बजेटका प्राथमिकताका विषय (करबाहेक)मा केन्द्रित भएर गर्न सभामुख सुवाश नेम्वाङले समय दिएपछि विभिन्न नेताले बोलेका थिए । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटका प्राथमिकताबारे सरकारको धारणा राखेका थिए । लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन पौडेलको सुझाव छलफलमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले..
असारमै बजेट आउँछः उपाध्यक्ष पोखरेल
सोमबार, आषाढ १४, २०७२ साल
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आठ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब सोमबार पोखरेलले उक्त रकममा सात अर्ब ३५ अर्ब नियमित बजेट र बाँकी पुनर्निर्माणका लागि विशेष बजेट आउने जानकारी दिए । उनले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यो महिनाको अन्तिममा बजेट ल्याउने तयारी..
बुधबार, जेष्ठ २७, २०७२ साल
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि विशेष भूकम्प बजेट निर्माण गर्नुपर्ने र क्रमागत आयोजनालाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रकम कटौती हुन नहुने भन्दै बरु सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ब्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले सरकारले बजेट घटाउने होइन खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भन्दै सरकारको..
आगामी बजेटको आकार नौ खर्बसम्म पुग्नसक्ने
आईतवार, जेष्ठ २४, २०७२ साल
भूकम्प पछिको पुनर्वास र पुनर्निर्माणको लागि समेत लक्षित गरेर बजेटको सिलिङ बढाउने तयारी भएको आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । अधिकारीले पुनर्वास र पुनर्निर्माणको कामलाई समेत लक्षित गरेर राजस्वका स्रोत, आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग अनुदान तथा ऋणका आधारमा बजेटको अनुमान तय गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । आयोगले संभवतः मंगलबारसम्म आगामी बजेटको सिलिङ तोक्ने छ । आयोगले देशको आवश्यकता, माग,..
अर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्र
आईतवार, जेष्ठ ३, २०७२ साल
अर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको अर्थतन्त्रअर्थमन्त्री डा। महत आफै खुम्च्याउँदै देशको..
कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा
कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा कुलेखानी तेस्रोको ७० प्रतिशत काम पूरा..
रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु
रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन सुरु..
अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत
अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत अलैंचीको मूल्य बढेपिछकृषकलाई राहत..
स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन
स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन स्याङ्जामा धान र सुन्तलाको उत्पादन..
भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड
भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण ३७ करोड ..
Results 1669: You are at page 56 of 56
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56